ခေတ် ကို ဆက်လက် ကိုးကား တုန်း
ခေတ် ရဲ့ အဆက်အစပ် တွေ ကို
ခေတ် ခြင်း တွဲပိုး
ခေတ် အစ ခေတ်အလယ် ခေတ်အဆုံး
ကာလ သုံးပါး အကြောင်း
ခေတ်လှိုင်းကို ကျော်ဖြတ်..လှော်တတ် ကို ရဲရဲပြောင်း..
ခေတ်အတိုင်း..ခေတ်သမိုင်း .. ခေတ်မရိုင်းကြောင်း
ငြင်းခုံရင်း ကွဲလွဲ.. ကွဲလွဲရင်း အမြင်မတူ..
ခေတ်ပုံတူ တော့ မျိုးပွား .. ခေတ်မျိုးကွဲ ခြင်း ကိုင်းယူ…
ခေတ်သစ် ..စနစ်သစ်..ဘုရားသခင် အသစ် တို့..
တတိယမြောက် ခေတ် မှာ.. ရှင်ပြန် ထ မြောက်
ယုံကြည်သူ လက်သစ်တွေအောက်..ခေတ်ရောက်ရ ခြိမ့်..
ကွန်မြူနစ် လက်သစ်..အရင်းရှင်လက်သစ်.. နာဇီလက်သစ်..
တကယ် သစ် မသစ်..လက်ဖြန့် တိုက်စစ်တော့မှ..
မျက်နှာ ဟောင်း တွေက အတုဖြစ်....
ခေတ်အစစ် က ဖြင့်....ကျပျောက် ရစ်ပေါ့..
ကမ္ဘာ့ရွာ ကောက်ရိုးပုံ အောက်..
ရေဆန်မှာ မျောပါသွားတဲ့ ခေတ်..
ခေတ်ရဲ့ ဆက်ကြောင်း... စွတ်လမ်း မပြောင်းနဲ့ ..
ခေတ်ဟောင်းကို တနေ့ ပြန်ရောက်စေ့မယ်…
ဟုတ်တယ်မကေ ဂျင်းပန်အပွတွေကနေ အောက်၇ှုးအောက်ရှုးတွေကနေ တည့် . တည့်ကနေ အကျပ်
အင်းဒီအပွတစ်ထည် ပြစ်တော့မလို့ လည်းလုပ်ရော. ဒီလထုတ် မဂ္ဂဇင်းမှာ ဒီနှစ်ပြန်လည်ခေတ်စားမည့် ဂျင်းဘောင်းဘီပွများတဲ့ ကဲ ဒါလည်း ခေတ်ဟောင်းကို တနေ့ ပြန်ရောက်တာပဲ မို့ လား...
နံပတ်တစ်ကနေ မန့်ရာတာ အားနာတယ်ကွယ်.....
တစ်ခါတစ်ခါတော့ ခေတ်ကို တမင်ကို မျက်ခြေဖြတ်ထားမိတယ်...
ဒီလိုနဲ့ ခေတ်ဟောင်းကို တနေ့ ပြန်ရောက်စေ့မယ်…
ခေတ်ပျက်က တရားခံ..... ပြန်ရောက်လာမဲ့ခေတ်ဟောင်းမှာ တမ်းတမိတာတွေ ပြန်ရ,ပါရစေ....
တခုသော ခေတ် ကတော့
ခေတ် ကုန်သွားလေမလား ..
ငယ်ငယ်က မင်းမှာ အဆက် ဘယ်သူလဲဆိုရင် ..မင်းရည်းစားဘယ်သူလဲလို့ မေးတာ..
ချိပ်ထမီဝတ်ထားတဲ့ ..ဟို သက်ကြားအိုကြီးတွေလား..
www.guidingstarsofburma.blogspot.com Welcome to our blog! Thank you so much !
ဒီမိုး ဒီလေ ဒီလူတွေနဲ့ကတော့ ........... ခေတ်ဟောင်းကို ပြန်မရောက်သေးတာလား ခေတ်ဟောင်းထဲက မထွက်နိုင်သေးတာလား မသိတော့ပါဘူး မကေ ရယ်..ဟင်း
♪ ♫♪ ခေတ်သမိုင်း အဆက်ဆက် ရာဇ၀င် အဆက်ဆက် အကောင်းဆုံးလို့လည်း မပြောလိုပြီ...♫♪
xxxဇတ်တော် ထဲက ဗိုလ်အောင်ဒင် လို လွမ်းပြလိုက်တော့မည်...♫♪♪
(xxx အဲ့ဒီနား စာသားမေ့သွားလို့)
ခေတ်ကို ဘယ်လိုဖြတ်ဖြတ် ခေတ်မှာ အဆက် ရှိတာ ငြင်းမရဘူး။ ကိုယ်သိတာ ကိုယ်ပြောရရင် RIT, YIT, YTU, GTC, IMT ဘယ်လိုပြောင်း ဘယ်လို ခွဲလဲ ငါတို့ မျိုးဆက် ဖြစ်တည်ဆဲပါပဲ အမကေရေ.. ဒါထက် စကားမစပ် ဘယ်သူ့ဓာတ်ပုံလေးလဲ မျက်ခုံး လေးက လှလိုက်တာ :)